Oats ho an'ny soavaly: ohatrinona, ohatrinona, oviana ary ny antony hanomezana azy ireo. | Soavaly Noti
Oats ho an'ny soavaly, fampiasa amin'ny sakafo nentin-drazana
Jenny monge | | sakafo
Ny fanomezana sakafo ny soavalintsika dia zavatra mampatahotra antsika mandrakariva. Inona ny serealy omena, amin'ny ova inona? Mahazo ny mineraly sy vitamina ilaina amin'ny sakafo ve izy ireo? Manana lesoka ve izy ireo? Tokony omena fanampin-tsakafo ve?
Ao amin'ity lahatsoratra ity andao hiresaka serealy manokana: oats. Manam-pahaizana manokana no manolotra an'ity serealy ity ho iray amin'ireo mety indrindra. Na izany aza, ny tombony sy fatiantoka entin'ny soavaly soavaly dia miankina betsaka amin'ny toetrany, ny toetrany ary ny asany. Andao hojerentsika hoe inona no atolotray ny mpamatsy vola antsika!
Rehefa mamaritra hoe iza no sakafo mety indrindra amin'ny soavaly, dia tsy maintsy tadidintsika ny toetra ara-batana amin'ny rafi-pandevonan-kanina: fitsakoana miadana sy mitandrina, vavony tsy misy fahaiza-manao izay tsy maintsy ariana imbetsaka mandritra ny andro, ny tsinaibe manao ny fandevonan-kanina ny anzima sy ny seza lehibe misy ny fanafihana mikraoba ary toerana misy ny sakafo mihinana.
Izy rehetra mahatonga ireo biby ireo ho mora tratry ny olan'ny fitaterana sakafo sy ny fanovana toy ny tsy fihinanan-kanina, colic, sns.
Ny sakafon'izy ireo dia tsy maintsy voalanjalanja ary hiankina amin'ny asan'ny biby ataontsika na tsia. Teo no nilalaovan'izy ireo voamadinika voamadinika izay maneho loharanon-kery lehibe ho an'ireo soavaly mitaky haavon'ny angovo avo lenta, ohatra ny atleta.
Ho hitantsika amin'ny an-tsipiriany ny toetran'ny oats ho anisan'ny famahanana Equine.
1 Oats ho an'ny soavaly
2 Tombony azo amin'ny soavaly
3 Rahoviana ary ahoana no hanomezana sakafo ny soavaly soavalintsika?
4 Omeo voalohany ny oatmeal
Oats ho an'ny soavaly
Ny otrikaina dia a voamadinika tena mahazatra amin'ny sakafo Equine. Miaraka amin'ny orza, katsaka na varimbazaha, izy io dia iray amin'ireo voa lehibe ho an'ny bibintsika.
Izy io dia misy gliosida maro toy ny starch, izay hohosorana rano ary hivadika siramamy, a loharanon'ny angovo ilaina amin'ny asa hozatra sy ny fampiasan'ny soavaly. Zava-dehibe ho an'ireo soavaly fanatanjahan-tena ireo izay mamoaka angovo haingana, ohatra amin'ny hazakazaka.
Noho ny toetran'ny oaka dia voatery mitsako azy tsara ny soavaly, ka mampiroborobo ny fandevonan-kanina azy. Toy izany koa, raha ny tsikera marika Piensos Pavo ao amin'ny pejiny, ny siramamy dia manentana ny ati-doha amin'ny famokarana serotoninina. Ara-dalàna raha ny soavaly sasany no mahatsapa fa voan'ny otrikaina, satria ny serotonin "hormonin'ny fahasambarana" io. Ny soavaly maivana indrindra dia mety ho lasa mientanentana na mitebiteby rehefa avy mihinana oats na serealy hafa misy starch.
Tombony azo amin'ny soavaly
Oats dia misy a ambony isan-jaton'ny tavy, inona no afindra amin'ny mamirapiratra volo.
Mora levona mora kokoa ny tsiranoka ao anaty ozy raha oharina amin'ny voamaina hafa, ka milamina tsara ny siramamy ary miditra ao anaty rà haingana aorian'ny fihinana azy. Izany dia miteraka manome angovo soavaly haingana dia haingana, izay mety amin'ny soavaly fanatanjahan-tena.
Misy a fifantohana ambony kokoa amin'ny fibre sy ny fibre mentes noho ny voamaina hafa Ny fibre avo lenta dia tena ilaina mba hisorohana ny olana amin'ny fandevonan-kanina.
Ny siramamy ao amin'ny vatana dia manentana ny famokarana serotonine, fantatra amin'ny hoe hormonin'ny fahasambarana. Ity vokatra ity dia tsy mitovy amin'ny santionany tsirairay ary ny sasany dia mety ho faly. Noho io antony io dia maro ny tompon-trano mahatsapa fa ny soavalin'izy ireo dia alohan'ny fihinanana voan-kazo. Raha mihoapampana ity fientanam-po ity ka manjary lasa olana dia misy safidy hafa hamahanana soavaly tsy misy oat ary na tsy misy siramamy na starch aza.
Rahoviana ary ahoana no hanomezana sakafo ny soavaly soavalintsika?
Misy izany miandry eo anelanelan'ny adiny iray sy sasany ary roa ora aorian'ny fampiharana mba hanomezana sakafo ny soavaly. Tokony hitandrina amin'ny rano koa isika ary hisoroka ny fihinanana tafahoatra noho ny havizanana. Miandry ny fofonain'ny soavaly hiala sasatra alohan'ny hanolorany rano.
La oats Tsy mety amin'ny fitomboan'ny foal izy io, ka tsara kokoa ny miandry mandra-pahatongan'ny olon-dehibe biby hanomboka hanome azy io. Ambonin'izany rehetra izany dia sakafo hohanina amin'ny soavalintsika raha manao fampiharana be dia be isan'andro izy ary mila angovo. Na ahoana na ahoana, dia foana Ny famahanana dia tsy maintsy refesina arakaraka ny filan'ny soavaly. Amin'io lafiny io, mora ny manadihady ilay forage mba hahitana ny tsy fahampian'ny otrikaina.
Na dia mahasoa an'ireo soavaly ara-panatanjahantena aza ny voany dia tsy maintsy haintsika ny manome azy io. Ity serealy ity misy fosforôra betsaka noho ny calcium. Noho izany tsy maintsy ampiarahina amin'ny sakafo hafa izay misy kalsioma betsaka kokoa noho ny fosforosy toy ny alfalfa. Ny mety indrindra amin'ny fanompoana kalsioma sy phosforus voalanjalanja dia ampahany 2 amin'ny oat ho an'ny 1 amin'ny alfalfa.
Omeo voalohany ny oatmeal
Ny maha-serealy proteinina avo lenta anao, raha mbola tsy nihinana oats ny soavalinao taloha dia tokony ampidirinao ao anaty sakafony izany miandalana ary amin'ny habetsahana kely. Manodidina ny 100 grama isan'andro mandritra ny herinandro sy sasany Soso-kevitra izany, avy eo dia mila mandeha ianao mampiakatra tsikelikely ny vola isaky ny elanelam-potoana isan-kerinandro na herinandro sy tapany.
Any Espana isika dia afaka mahita voan-kazo fotsy, volamena ary mainty. Araka ny fomban-drazana, ny be mpampiasa indrindra dia fotsy, raha any amin'ny firenena toa an'i Frantsa kosa dia ny mainty no voafidy. Ho fanampin'izany, dia hitantsika eny an-tsena ny fomba isan-karazany amin'ny famatsiana an'io sakafo io, ohatra, oats na voa.
Hetezo oaka: Ity fomba famatsy oats ity dia ny fanomezana ny zavamaniry fa tsy ny voam-bary. Ny zavamaniry oat dia manana fibre betsaka ary mahasoa amin'ny fandevonan-kanina.
Oatmeal: Azo omena ny varimbazaha manontolo ground, lena, peeled na micronized. Amin'ity tranga ity dia sokafana ny akorany ary afaka mandevona tsara kokoa ny voa ny biby..
Oats voa feno dia tokony omena toy oatmeal tsy misy vovoka, miaraka amin'ny hoditra tsara sy madio rehetra. Araka ny efa noresahintsika, raha omena oats dia tsy maintsy ampifangaroina amin'ny sakafo hafa foana izy io mba hahazoan'ny soavalintsika ny otrikaina ilaina rehetra. Izany dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny famakafakana ny fiompiana sy famatsiana sakafo na famenon-tsakafo miaraka amin'ny otrikaina tsy hita ho an'ny biby.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny famahanana sy ny fandevonan-tsoavaly soavaly dia azonao atao ny mamantatra izany firy ny vavonin'ny soavaly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » sakafo » Oats ho an'ny soavaly, fampiasa amin'ny sakafo nentin-drazana
Mamily soavaly sy ny hazakazany